Continue to improve strongness which can produce performance | Mycanvas
Continue to improve strongness which can produce performance
လုပ်ငန်းခွင်မှာ သင့်လုပ်ဆောင်ရည်မြင့်မားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ? သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်အရာတွေလိုအပ်သလဲ? အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ လေ့လာသင်ယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘယ်အလုပ်ကိုပဲဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါစေ ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ Software ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Sales Stuff တစ်ယောက်ဖြစ်ပါက သင်ဟာ ရောင်းကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လေ့လာသိရှိထားရမှာဖြစ်ပြီး Sales Skills တွေဖြစ်တဲ့ Communication, Negotiation, Presentation အစရှိတဲ့ စွမ်းရည်များကို ပိုမိုတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင်နဲ့ သင့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို မြှင့်တင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ? သင်ဟာ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုလေ့လာဖို့အတွက် တစ်ပါတ်မှာ အချိန်ဘယ်လောက် သုံးတတ်ပါသလဲ? ဒီမေးခွန်းကို စီးပွားရေးသမားအနည်းငယ်လောက်ပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ တိကျစွာဖြေဆိုနိုင်မှာပါ။ မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်များကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင်ဟာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲ ရေရှည်လေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ရန် သင်ယူလေ့လာထက် ရေရှည်အမြဲလေ့လာသင်ယူနေရန်အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်တော့အလေ့အထရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုအလေးထားတဲ့လူများစွာရှိပါတယ် : ဥပမာအားဖြင့် : Austrian-American စီးပွားစီမံအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Peter Drucker က “ဗဟုသုတဟူသည် တိုးတက်မှု, ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်မှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးများလာမှုမရှိလျှင် ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုကို အာရုံစိုက်ပြီး စာအုပ်များစွာရေးသားခဲ့သောအမေရိကန်စာရေးဆရာ၊ ဟောပြောသူ သင်းအုပ်ဆရာ ဖြစ်တဲ့ John C. Maxwell က “မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမင်းရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေမှာတွေ့နိုင်တဲ့အတွက် မင်းနေ့စဉ်လုပ်နေတာတွေကိုမပြောင်းလဲမချင်း မင်းဘဝဟာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုရလိုလျှင် ဒါမှမဟုတ် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရယူလိုလျှင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုနေ့စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်တတ်တဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလေ့အထကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘဝမှာဘာမှပြောင်းလဲမလာဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်တိုးတက်စေမယ့်အရာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး…ဒါကြောင့် သင့်ဘဝအရည်အသွေးတို’တက်စေဖို့ ဒ္နေ့ကစပြီး နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ကြရအောင်!!